Foomka Codsiga Gargaarka Guriyeynta Degdega ah
Macluumaadka qofka lala xiriirayo
Dhamaystir foomkan si aad u codsatid kaalmada gargaarka degdega ah ee ka imaanaysa kaalmada guryaynta ee Degmada Hennepin, oo ay la socoto kaalmada gargaarka degdega ah iyo gargaarka degdega ah kaalmada guud, iyo maalgelinta ka imaanaysa CARES Act. Dhamaystirka foomkan wuxuu qaadnayaa 10-15 daqiiqadood.
Ka dib markaad dhamaystirted arjigan, waa la eegayaa in aad u qalantid. Waxaana laga yaabaa in lagula soo xiriiro hadii macluumaad dheeraad ah lagaa rabo intaadan helin ogolaasho ama diidmo kama danbays ah.
Si aan shaqada ugu dhakhsano, waxaad haysan doontaa fursad aad ku cadaysid waxyaabaha laga rabo foomkan oo ay ka mid yihiin
halka lagala xiriirayo milkiilaha aad guriga ka kiraysatay
lambarada koontooyinka korantada, qaboojiyaha, gaaska, biyaha iyo….
Dukumentiga (ama sawiradooda) sida:
Dakhligii ku soo galay 2019 oo dhamays tiran
Dakhligii aad heshay 30 casho ee ugu dambeeyey oo dhamaystiran
Isbadelkii shaqada uu keenay COVID-19
Cadada lacagaha lagugu leeyahay ee kirada iyo korantada, qaboojiyaha, gaaska, biyaha iyo….
Kiraystayaasha leh dakhli ka hooseeyo 50%AMI sanadkiiba kuna nool Degmada Hennepin ee dakhliga dhexe ee aaga (AMI) (uu yahay mid ka hooseeya $36,200 qoys hal qof ah, $41,400 qoys laba qof ah $46,500 qoys sadex qof ah, $ 51,700 qoys afar qof ah, $55,850 qoys shan qof ah. Iwm.)
Uu Dakhligii soo geli jiray dhamaaday sababtuna tahay cudurka COVID-19
Aan haysan wax lacag ah oo ay ku bixiyaan kiradooda, marka lagu daro lacago ka soo galay shaqo, MFIP, faaiidada naafanimada, Caymiska Shaqo La’aanta, lacagtii uu federaalku bixiyey, iwm.
Inaadan deganayn guryaha dadweynaha, helaysid lacagta caawimaada kirada sida Section 8 ama gargaar dhinaca guriga ah, ama aad isticmaalayso bishan gargaarka degdeg ah oo meel kale ka yimi
Caawimo noocee ayaad doonaysaa?
Mid dooro iyo/ ama koranto, qaboojiye, gaas, taleefoon, biyo, qashin Caawimaad dhinaca sharciga sidii aan u fahmi lahaa xuquuqdayda kiraystanimo ama kaalmo dhinaca maxkamada ah Kaalmo qorshe sidii aan isu fahmi lahayn milkiilaha aan guriga ka kiraystay Kaalmo sidii aan uga shaqayn lahaa dhowr waxyaabood si loo xaliyo gurigayga iyo dakhliga
Waa maxay xaalada guriga aad hada degan tahay?
Mid dooro Waxaan ku noolahay guri aan leeyahay Waxaan ku jiraa abaartamenti aan kiraystay (waxaan ku jiraa heshiis kiro) Waxaan la noolahay dad kale kumana jiro heshiiska kirada Waxaan ahay guri la’aan, shelterkaan joogaa ama dibada/baabuurkayga
Magaca milkiilaha guriga/maamulaha dhismaha
Iimaylka ama taleefoon lambarka milkiilaha guriga /maamuluha dhismaha
Waxaan ogolahay in ay Degmada Hennepin iyo hay’adaha bulshadu la soo xiriiraan milkiilaha guriga ann deganahay si ay u xaqiijiyaan degenaanshayga, kirada ugu dhiman, iyo qorshaha sidaan kirada u bixin lahaa.
Soo geli cadaynta kirada lagugu leeyahay (Waaxa ka mid noqon kara qoraal kirada ah oo ka yimi milkiilaha guriga aad ka kiraysatay)
Hadii aad codsanaysid koranto, qaboojiye, gaas, biyo, kuwee baad dalbanaysaa in lagaa caawiyo?
Lambarka koontada gaaska
Lambarka koontada korantada
Adiga ama xaaskaaga midkiina masoo qabtay shaqo milatari
Askarka soo halgantay waxay ka heli karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin MACV. La xiriir 1833-222-6228 ama email intake@mac-v.org
Select one Bloomington Brooklyn Center Brooklyn Park Champlin Chanhassen Corcoran Crystal Dayton Deephaven Eden Prairie Edina Excelsior Golden Valley Greenfield Greenwood Hanover Hopkins Independence Long Lake Loretto Maple Grove Maple Plain Medicine Lake Medina Minneapolis Minnetonka Minnetonka Beach Minnetrista Mound New Hope Orono Osseo Plymouth Richfield Robbinsdale Rockford Rogers St. Anthony St. Bonifacius St. Louis Park Shorewood Spring Park Tonka Bay Wayzata Woodland
Maadaama aad degan tahay meel aan ahayn Degmada Hennepin, uma qalantid dhaqaalahan/maalgelintan ee arjigan. Fadlan la xiriir degmada aad degan tahay. Hadii aad aaminsan tahay in inaad degan tahay Degmada Hennepin, fadlan fiiri in magaca magaalada aad degan tahay si saxa u qoran yahay.
Ma ku heli kartaa fariin qoraal ah lambarkan?
Sidee baa rabtaa in laguula soo xiriiro ( dhowr si baa dooran kartaa)
Ma u baahnaanaysaa tarjubaan marka lagu soo woco?
Luqada aad ku hadashid
Waa meeqa lacagta guud ee ku soo gashay reerkaaga sanadkii 2019? ( waxaa lagaa rabaa in aad keentid warqad dukumenti ah ama aad adigu cadayso)
Dakhliga guud waxaa ku jira lacagta shaqadaada kaasoo gasha canshuurta ka hor iyo wixii kalee lagaa jaro, sidoo kale lacagaha kaaga yimaada caymiska shaqo la’aanta, naafanimada, taageerada caruurta, ama caawimaada dadweynaha. Waa inaad keentid dukumentiyo ama aad adigu cadaysid marka dambe)
Soo geli cadaynta dakhliga guud
Waa meeqa lacagta guud ee ku soo gashay bishii hore?
Soo geli cadaynta dakhligaaga bishii ku soo gala
Sababta uu dakhligaagu isu dhimay
Mid dooro •	Shaqo li’i baa noqotay, waa lagu cayriyey, ama waa lagaa joojiyey sababtuna waa COVID-19 •	Saacadahaagii shaqadaa is dhimay sababtuna waa COVID -19 Waxaad yaraysay saacadaha shaqadaada ama shaqadii baa kaa joogsatay sababtoo ah waxaa kugu dhacay COVID-19 Ma awoodid in aad ka shaqaysid guriga banaankiisa sababtoo ah adiga ama qof qoyskaaga ka mida baa laga helay COVID-19 ama leh xaalad caafimaad daro aad u sareysa Other reason
Soo geli cadaynta dakhliga kaa dhinmay
Tan waxaa ka mid noqon kara ogaysiiska dhimista saacadaha ama shaqo joojinta kumeel gaarka ah.
Ma ka heshay kaalmada gargaarka degdega ah degmada (12 kii bilood) ee ugu dambeeyey?
Ma ka heshay kaalmada gargaarka degdega ah degmada 12 kii bilood ee ugu dambeeyey?
Ma degan tahay guryaha dadweynaha ama maka heshaa kaalmo kirada oo joogta ah Section 8, Taageero Guri, ama meel kale oo benaamij caawimaad kiro ah?
Ma aaminsan tahay in aad u qalantid Caymiska Shaqo La’aanta?
Waxaan cadaynayaa hadii aan helo wax dhaqaale ah oo meel kale ka imaanaya oo kirada guriga oo degdeg lagu bixinayo bishan kor ku xusan, Waxaan si dhakhso ah u soo sheegi doonaa meesha aan ka helay caawinta dhaqaale.
Waxaan cadeynayaa in macluumaadka aan ku bixiyey foomkan uu yahay run iyo sax. Waan fahansanahay in la isoo waydiinkaro cadaymo dheeraad waqti danbe.
Waxaan ogolahay in ay Degmada Hennepin la wadaagto arjigan hay’adaha bulshada ee ka hela dhaqaalaha gobolka, dowlada dhexe iyo meelaha kale gudaha ah ee kaalmeeya guryeynta.
Waxaa nalooga baahan yahay in aan ku siino Digniinta Tennessen ka hor intaanan kaa codsanin macluumaadkaaga shaqsiga ah sida ku xusan Minn Stat §13.04, subd. 2 Ujeedada ogeysiiskana waa in uu kuu sahlo inaad gaarto go’aan aad ogtahay oo ku saabsan hadii aad dhiibaysid xogta adiga kuu gaarka ah, taasoo lala wadaagi karo haya’daha dowlada, sida Degmada Hennepin iyo Guryanta Minnesota. Xogtan waxaa cid lala wadaagi karaa haduu jiro amar maxkamadeed ama gobolka lasiinayo ama sharci dejin dhowruhu codsado.
Waxaa nalooga baahan yahay in aan kugu wargelino xuquuqdaada ku saabsan macluumaadka aan kaa ururinayno ee kuu gaarka ah. Macluumaadka aan kaa ururinayno wuxuu sharci ahaan u kala soocmaa mid guud ama dadwayne (kaasoo uu qof kastaa arki karo) mid gaar ah (dadweynuhu aanay awood u lahayn inay arkaan, laakiin adigu aad arki kartid), ama qarsoodi ah (xitaa adigu ma arki kartid macluumaadka). Maadaama aad tahay kan codsanaya kaalmadan, inta badan macluumaadka lagaa codsaday ee kugu saabsan wuxuu noqonayaa mid ka gaarka ah. Sida sharciga ah Khasab kuguma aha in aad dhiibtid macluumaadka lagu waydiistay. Hase yeeshee hadii aadan dhiibin, waxaa laga yaabaa in aadan helin addeegyada iyo waxyaabaha kale ee aad dalbanayso. Hadii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan digniintan. Fadlan la soo xiriir shaqaalaha hay’ada.
Rent verification uploaded
Rent balance verified by
Rent balance verification date
Utility balance verified by
Utility balance verification date
Income verified by
Income verification date
Need resolved by EA or EGA
Hore u sii gudub